संसारलाई साढे पाँच फन्कोमा एक फन्को । सुवास खनाल पुष्कर शाह मास्टर बन्ने सपना बोकेको एउटा पात्र थियो तर कसरी यस्तो यायावर बनेर निस्किए ?
ायो । उनले आफ्ना भ्रमणका दैनिकीहरुलाई पुस्तकाकार रुप दिने प्रयत्न गरे र त्यसमा साथ लागे भुपेन्द्र खड्का र बुकहिल ,यी सम्पूर्ण पाठकीय हिसाबमा धन्यवादका पात्र हुन् ।
जब उनी यात्रामा निस्किन चाहन्थे , उनीसँग अगाडि सहज बाटो थिएन । आमाले पत्याइनन् । साथीहरुले गफ दियो सोचे । कतिले पुष्कर ठिक दिमागमा रहेन सम्म
उनी त्यस्तो यात्रामा निस्किए जसले उनलाई संसार मात्र घुमाएन यो पृथ्वी नामको कुनाहरुमा भएका भव्यता र साँघुरोपनाका यथार्थहरुलाई चिन्न सहयोग पु¥
या भन्न भ्याए । उनमा आमालाई मनाउने प्रकृया पुरा भएका बखत् पूर्ण साहस भरियो ,अब यो संसारलाई साइकलको भरमा पनि जिती दिन सक्छु ।
मैले टिम टेलिभिजनको इन्टरभ्युमा सोधे –‘साइकल नै किन रोज्नुभयो ?’
उनले उत्तर दिए –‘ मसँग साइकल बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन । मसँग कहाँ त्यत्ति पैसा हुनसक्थ्यो र संसार घुम्न ? सबभन्दा कम खर्चिलो यही हुन सक्थ्यो , त्यसैले यो रोजेँ । ’त्यतिखेर मैले उक्त पुस्तक पढेको थिइनँ । पछि पढेँ , पुस्तकमा पनि उही स्विकारोक्ती देखेँ । उनले पैसाले संसार घुमेका होइनन् , आत्मसाहसले घुमेका हुन् ।
उनले विश्वका १५० देशहरु घुमे । यो बीचमा उनले धेरै सुखद् अनुभूतिहरु सँगाले । साथमा दुखद् पनि । चाइनाको कुनै होटलबाट त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका कारण राति नै होटल छाडी भाग्नुपरेको प्रसङ्ग । मेक्सिको , बार्बाडोज, न्युयोर्क लगायतका ठाउँमा लुटिँदाको प्रसङ्ग दर्दनाक छन् । यो विश्वको सबैभन्दा बढी धनाढ्य भनिने देश अमेरिकाको न्युयोर्कमा उनलाई कसैले दश डलरको लागि कन्चटमा पेस्तोल तेस्र्याउँछ । यो अपत्यरिलो घटनाजस्तो पनि लाग्छ तर यो साँचो हो भन्ने पुष्टि मलाई अर्को अमेरिका नै बस्ने एक साथिले पनि पुष्टि गरिदिएका छन् । उनी पनि त्यहाँ लुटिएको प्रसङ्ग सुनेको छु त्यो पनि यस्तै सानो रकमकै लागि । यहाँ त पेस्तोलको कुरा आयो तर छुरी देखाएर बढी लुट्ने गरेको अनुभव सुन्न पाइन्छ र त्यस्तोमा बढी गाँजाको नशा लिने व्यक्तिहरु सक्रिय हुने गरेको बताइन्छ ।
शाहसँगको संवादमा उनी भन्छन् – यो संसारमा यत्ति धेरै राम्रा मान्छेहरु छन् । यत्ति धेरै सिर्जनात्मक मान्छेहरु छन् । त्यसको तुलनामा खराबहरु नगन्य छन् । यो संसारलाई यति राम्रो र भव्य ती संसारका असल मान्छेहरुले नै बनाएका हुन् तर घटनाहरुको स्मरण गरिँदा खराब विषयहरु बढी सम्झना हुँदा रहेछन् । मेक्सिकोमा लुटिँदाको घटना उनी बढी भयानक अनुभव गर्छन् र आफ्नो पुराना यात्राहरुलाई रिवाइन्ड गराउँदा त्यो घटना चित्र मष्तिष्कमा आउने बताउँछन् । उनको विचारमा त्यो दिन उनको हत्या हुँदै थियो तर उनी ती लुटेराहरुको कमजोर संयन्त्रलाई भत्काएर भाग्न सफल हुन्छन् । गुण्डा ,लुटेराहरुबाट बच्नु एक पक्ष रहन्थ्यो भने देशको सामान्य नियमकानुन नजानेर परिपालन गर्न नसक्दा हत्कडी तोडेर भाग्नु अर्को पक्ष रहन्थ्यो । उनी यो दुबै परिस्थितिहरुलाई चिर्दै अघि बढ्नुको नियतिका साथ थिए ।
यो जीवनीपरक पुस्तक पुष्करका डायरीहरुकै सम्पादित प्रकाशन हो । चार हजार पन्ध्र दिनमा उनीसँग त्यति नै सङ्ख्यामा दैनिकीहरु थिए । यो पुस्तक सम्पूर्ण अंशको प्रकाशन होइन र सम्पादित अंशको प्रकाशन हो । यसर्थ उनका कतिपय दैनिकीहरु यसमा नआएका हुन सक्छन् र कतिपय त प्रकाशन जरुरी नदेखिएको पनि हुन सक्छ । पुस्तकलाई सिलसिलेबारमात्र तर उपशीर्षकहरुमा विभाजन नगरेका भए , अध्ययनका निम्ति उति रुचिकर र सहज नलाग्न सक्थ्यो तर उपशीर्षकहरुका साथ छोटा छोटा प्रसङ्ग जोड्नुले पुस्तक अध्ययनका निम्ति सहज र सुबोध्य बनेको छ ।
अङग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भनिन्छ किनकी यो भाषा बढीले बुझ्छन् । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण भाषा इसाराको रहेको पुष्कर बताउँछन् । अङ्ग्रेजी नबुझ्ने अवस्थामा पनि यो सहज हुने उनी बताउँछन् । त्यसमै पनि फरक ठाउँका फरक रहनसहन ,चालचलन र जीवनपद्धतिले समस्या ल्याउने उनको अनुभव छ । चिनमा खाना खाने तरिका देखाउँदा चोरी औला र माझी औँलाको प्रयोग गरी मुखतिर लगेर देखाइने तर कहीँ त्यसैलाई धुमपानको सङ्केतका ंरुपमा बुझिदिने , त्यस्तै सुत्नको लागि सङ्केत गर्दा टेलिफोन गर्न खोजेको सङ्केतका रुपमा बुझ्ने समस्याहरु देखिने उनको अनुभव छ ।
पुस्तकका धेरै सकारात्मक पक्षहरु छन् । अध्ययनमा एक रसमात्र प्राप्त हुँदैन । छोटा छोटा उपशीर्षकमा रहेका र हास्यात्मक तथा कहीँ अलिक रहस्यात्मक शैलीले प्रस्तुत गरिएकाले पुस्तकले तानिरहन्छ । साथमा विश्वलाई यस पुस्तकका माध्यमले चिन्न सहज बनाउँछ । विश्व परिदृश्यका धेरै पक्षहरुको जानकारी मिल्छ । त्यहाँको विकास अवस्थिति , प्राकृतिक सौन्दर्य , खानपान र संस्कृतिका झिल्काहरु देखा पर्दछन् ।
यति धेरै सकारात्मक पक्षहरु हुँदाहुँदै पनि यस पुस्तकले केही जोखिमहरु पनि सँगसँगै बोकेको छ । पुष्कर शाह साना साना बालबालिकादेखि ठुला सबैका लगि एक किसिमको आइकन हुन् । तर यो पुस्तकले उनलाई विश्व साइकल यात्रीका साथसाथै एक रक्स्याहाको परिचय पनि दिएको छ । किताबमा बढी यौनिक प्रसङ्गलाई जोड दिनाले उनको नियतमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । यी प्रसङ्ग आउनै नहुने भन्ने यस पङ्क्तिकारको पनि मान्यता होइन तर त्यसलाई एउटा पाटो मान्न सकिन्छ तर बढी जसो यौन प्रसङ्ग र रक्सीका प्रसङ्ग जोड्नुले पुस्तकलाई बिकाउ त बनायो होला तर यसलाई सँगसँगै आलोचनाको भागी पनि बनाएको छ ।
उनले यत्तिका देशको भ्रमण गरेका छन् । उनले वैयक्तिकीलाई बढी प्रकाशन गरेका छन् । त्यहाँका समस्या , त्यहाँका मानिसले गरिरहेका सङ्घर्ष ,त्यहाँ आएका सामाजिक विचलन आदिको उत्नि साह्रो वर्णन देखिन्न । यसैले कुनै पनि पक्षको उत्ति साह्रो सूक्ष्म विश्लेषण देखिन्न । यसमा सम्पादक वा लेखन सहयोगीको पनि कमजोरी देखिन्छ । पुस्तक बजारमा आउनु त्यसमाथि पनि अलिक विशिष्ट मान्छेको त्यसमा पाठकीय अपेक्षाहरु पनि उस्तैसँग गाँसिएका हुन्छन् । त्यो अपेक्षा पुस्तकले पुरा गर्न नसक्दा पुस्तक प्रकाशक, प्रकाशन सहयोगी र प्रकाशन पूर्व विषयवस्तुका अध्येता र विश्लेषकहरुको कमजोरी ठहर्न पुग्छ । पुष्कर शाहको विषयमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ । भविष्यमा अर्को कुनै जीवनीपरक पुस्तक प्रकाशन हुँदा यी कुरामा ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।
पुष्कर शाहले बताएका छन् –यो बीचमा उनको आमाको परिचय फेरिएको छ । अहिले उनकी आमा पुष्कर शाहकी आमा भनेर सबैले चिन्छन् जुन परिचय पुष्करको प्रशिद्दि अगाडि थिएन । उनले कमाएको मूल सम्पत्ति यही हो भनी उनी सम्झिन्छन् । अनि अर्को पक्ष उनले संसारका थुप्रै सुन्दर र विकसित देशहरु घुमे । तर उनी भन्छन् –‘नेपाल जति सुन्दर देश कुनै छैन । हामीले हामीलाई चिन्न सकिरहेका छैनौँ । हामी सँग व्यवस्थापन कमजोर भयो । सही नेतृत्वको विकास हुन सकेन । हामी हीरामाथि बसेर हीरा खोजिरहेका छौँ । ’
पुष्कर शाहका पुस्तकका केही शक्ति र सीमा अवस्य छन् । उनी व्यक्तिगत हिसाबमा भने निकै सरल र मिजासिलो छन् । उनको भविष्यको जीवन सुखमय बितोस् । उनको प्रसिद्दिको प्रकाशले देशलाई आलोकित तुल्याओस् शुभकामना ।
Posted by subas at 2:38 AM